Izixhobo ze-Android-iifowuni, iitafile, iwatchwatch kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 21)
I-Mbuynow Touch TWS, ii-headpods-style headphones ze- € 36.99 kuphela ngenxa yesaphulelo se-38% osigcina nge-23
Ii-headphone ezisezindlebeni zaseMbuynow, i-Touch TWS zii-headphone ze-Apple Airpods ezinesimbo esinexabiso lesandi esamkelekileyo namandla.
Mbuynow, Eyona khamera ye-HD ye-IP nge-35.99 € nje kuphela ngenxa yesaphulelo sayo sama-40% osindisa i-24
Ndikucebisa ukuba ujonge yonke into esiyifumana kule Mbuynow IP HD Camera kuba ngokuqinisekileyo uza kuyiphephetha.
UGoogle uzakwazisa isithethi esihlakaniphile ngescreen
UGoogle uzakwazisa isithethi esine-screen kulo nyaka. Fumana ngakumbi malunga nesithethi esitsha senkampani esiza ngokuwa.
Imifanekiso emitsha evuzayo kunye neenkcazo zeMandla elinye le-Motorola
Ukucaciswa okutsha okuvuzayo kwi-Motorola One Power. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ye-Android Enye yefowuni.
AbakwaNokia bazakwazisa ngefowuni entsha nge-21 ka-Agasti
Ifowuni entsha yakwaNokia iya kutyhilwa nge-21 ka-Agasti. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca, mhlawumbi iNokia 9.
INokia 7 Plus iphumelele ibhaso le-EISA kudidi lweyona fowuni yabathengi
INokia 7 Plus ifumene ibhaso le-EISA kwesona mobile esinconywayo kwintengiso. Fumana ngakumbi malunga neli bhaso libalulekileyo!
IGalaxy Note 8 ifumana i-patch yokhuseleko ka-Agasti
Isiqwenga sokhuseleko sika-Agasti siza kwiGlass Qaphela 8. Fumanisa malunga nepaki ebetha isiphelo esiphakamileyo se-Samsung kwezi ntsuku.
UGoogle uza kusebenza kumncedisi wakhe womzimba
Umqeqeshi kaGoogle: Umncedisi kaGoogle wokomelela komzimba. Fumanisa ngakumbi malunga nomncedisi ophehlelelwa yinkampani kungekudala.
Iimpawu eziphambili zeVivo X23 zivuthiwe: Ukwamkelwa kobuso be-3D kunye nokunye
Iimpawu eziphambili zeVivo X23 zihluziwe ngaphambi kokunikezelwa kwayo. Fumana ngakumbi malunga nokuza kusizisa kule mobile!
I-Honor 8X: I-Honor's New Screen enkulu evulekileyo
Ukucocwa kweenkcukacha zokuqala ze-Honor 8X. Fumanisa ngakumbi ngale fowuni evela kumenzi waseTshayina omele isikrini sayo esikhulu.
IHuawei Mate 20 iza kufika ngo-Okthobha
I-Huawei Mate 20 iya kuziswa ngokusesikweni ngo-Okthobha. Fumana ngakumbi malunga noluhlu olutsha lweefowuni ezivela kumenzi waseTshayina oza kufika oku kuwa.
Isamsung yazisa i-Exynos 5100, imodem yokuqala ye-5G yehlabathi yeefowuni
Isamsung, inkampani yaseMzantsi Korea, isandula ukwenza igosa le-Exynos 5100, imodem yokuqala ye-5G. Sandisa iindaba kuwe!
Ukuphonononga i-Wavefun Super X kunye ne-6-unit Express yokupha
IXiaomi Mi A2 ifumana uhlaziyo oluyivumela ukuba lirekhode kwi-1080p kwi-60fps
IXiaomi Mi A2 ifumana uhlaziyo oluhambelana nale nyanga, fumana okungakumbi malunga neendaba ezisizisa kule patch!
IMoto P30 isemthethweni: Ifowuni yokuqala yenotshi ye-Motorola
IMoto P30: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni yokuqala yenotshi eyazisiweyo namhlanje.
IXiaomi Pocophone F1 itshabalalisa ukhuphiswano lwayo kwiGeekbench
Uvavanyo lokuqala lokusebenza kweXiaomi Pocophone F1 lubonakele kwiGeekbench, iziphumo ziya kukumangalisa
I-Blackberry KEY2 LE iya kutyhilwa kwi-IFA 2018
I-Blackberry KEY2 LE iya kuziswa ngokusesikweni kwi-IFA 2018. Fumana ngakumbi malunga nokunikezelwa kwenkampani yefowuni entsha.
I-LG isebenza kwifowuni ye-5G kunyaka olandelayo
I-LG izakuqalisa ifowuni yayo yokuqala ye-5G kwisiqingatha sokuqala se-2019. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani yaseKorea ngale modeli.
Ukucaciswa kwe-OPPO F9 Pro kuvuza
Ukucoca inkcazo ye-OPPO F9 Pro entsha.Fumana okuninzi malunga nefowuni entsha yohlobo lwentengiso yaseTshayina ethiwe thaca kwiveki
IXiaomi Mi Pad 4 Plus isemthethweni: 10.1 ″ isikrini, 8.260mAh ibhetri nokunye
UXiaomi usandula ukwenza igosa elitsha lecwecwe: iMi Pad 4 Plus. Iza nescreen se-10.1-intshi kunye nebhetri enkulu ye-8.260mAh.
Zonke iinkcukacha zobuchwephesha zeHuawei Kirin 980 zihluziwe
Ukucaciswa kobuchwephesha kwiprosesa elandelayo yeHuawei, iHiSilicon Kirin 980, sele ivuza nje .Funda ngakumbi malunga nale SoC!
Iifowuni zokuqala zakwaNokia zokuhlaziya kwi-Android 9.0 Pie ityhiliwe
Ezi iya kuba ziifowuni zokuqala zeNokia ukuba zibe nePie ye-Android 9.0. Fumanisa ukuba yeyiphi imodeli eya kuba yeyokuqala ukuphucula.
Iselfowuni esongwayo yeSamsung iza kufika kwangoko kunokuba bekulindelwe
Ifowuni enokusongelwa yeSamsung iyeza kwakamsinya kunokuba bekulindelwe. Fumanisa ngakumbi malunga namarhe azisa ngokufika kwale fowuni.
Ukucoca unikezelo lokuqala lweMoto Moto P30. Enkosi kubo sinoluvo olucacileyo loyilo lwefowuni eya kuba nenotshi enkulu.
IXiaomi Redmi 6 kunye neRedmi 6A ifika eSpain
IXiaomi Redmi 6 kunye neRedmi 6A zisungulwe ngokusemthethweni eSpain. Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kweefowuni ezimbini ezisezantsi.
IXiaomi idlula i-Samsung kwintengiso e-India
IXiaomi igqithile kwi-Samsung njengowona mthengisi ubalaseleyo e-India. Fumana ngakumbi malunga nokuthengisa kwenkampani yaseKorea eIndiya, intengiso ebaluleke ngakumbi.
I-Alcatel 7 ngoku isemthethweni: Yazi iinkcukacha zayo
Iselfowuni 7: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kumenzi otyhiliweyo namhlanje.
I-Oppo R17 isemthethweni: 6.4 ″ AMOLED ngenotshi, i-SD670 kunye nokunye. Yazi!
I-Oppo R17 isandula ukutyhilwa yinkampani kwiwebhusayithi yayo yaseTshayina. Fumanisa zonke iinkcukacha zobuchwephesha beselfowuni entsha!
Khuphela amaphephadonga e-Samsung Galaxy Note 9
Ngalo lonke ixesha i-terminal entsha ingena kwimarike, uninzi lwabasebenzisi be-Android abanamandla abajonga amaphephadonga afakwe kuyo Ukuba uyayithanda imifanekiso yamaphephadonga emitsha esiyibonileyo ngexesha lokuboniswa kweGalaxy Note 9, emva koko sikubonisa amakhonkco kubo.
I-OUKITEL WP2: Ifowuni ekwaziyo ukumelana namanzi
I-OUKITEL WP2: Eyona fowuni ingena manzi. Fumanisa ngakumbi ngale modeli intsha yohlobo lwaseTshayina oluza kufika ngoSeptemba.
I-POCOPHONE F1 iya kuboniswa nge-22 ka-Agasti e-India
I-POCOPHONE F1 iya kutyhilwa e-India nge-22 ka-Agasti. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wenkcazo yesiphelo esiphezulu sophawu lwesiTshayina.
Ezinye i-Pixel XL zineengxaki ngokutshaja ngokukhawuleza
Abasebenzisi abanePixel XL baneengxaki zokutshaja ngokukhawuleza. Fumana ngakumbi malunga nengxaki emva kokuhlaziya kwiPie ye-Android 9.0.
Ibhetri ye-Galaxy Note 9 ikhuselekile kakhulu, ngokwe-Samsung
Ibhetri ye-Samsung Galaxy Note 9 ikhuselekile kunangaphambili. Fumanisa malunga namanyathelo athathiweyo ukukhusela ibhetri.
Imifanekiso yokuqala yeHuawei Mate 20 Lite ibonisa inotshi yayo
Ukucoca iinkcukacha kunye nemifanekiso yeHuawei Mate 20 Lite. Fumanisa ngakumbi malunga neprimiyamu entsha yaphakathi kwepakati yohlobo lwentengiso yaseTshayina.
Ukucaciswa kweBlackberry KEY2 LE, ifowuni yenkampani elandelayo, icociwe
Iimpawu kunye nokubalulwa kobuchwephesha beBlackberry KEY2 LE, umahluko omncinci we-KEY2, sele uvuza nje. Sikwazisa!
I-ZTE sele ivavanya i-5G
I-ZTE iqhuba iimvavanyo zokuqala nge5G e China. Fumana ngakumbi malunga nokuqhubela phambili kwale teknoloji iya kuqaliswa ngo-2019.
I-OPPO Fumana i-X Super Flash izakuqalisa nge-17 ka-Agasti
I-OPPO Fumana i-X Super Flash izakuqalisa e-China nge-17 ka-Agasti. Fumana ngakumbi malunga nokukhutshwa kwale nguqulo yefowuni.
I-HTC ityhila iifowuni zokuqala ukubonisa i-Android 9.0 Pie
I-HTC yazisa ukuba zeziphi iifowuni eziza kuhlaziya kwi-Android 9.0 Pie. Fumanisa uluhlu lweefowuni zokuqala zebrendi eziza kuhlaziya kuqala.
Ezi zizinto ezichaziweyo zeSony Xperia XZ3 ngokungqinelana nokuvuza okutsha
I-rumor entsha ye-Sony Xperia XZ3 iza kuthi kwiwebhusayithi esemthethweni yenkampani, ezi zinokuba yinkcazo yale fowuni.
I-OPPO Fumana i-X Lamborghini ithengisa ngaphandle kwemizuzwana emine
I-OPPO Fumana i-X Lamborghini ithengisa e-China kwimizuzwana nje emine. Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo yale nguqulo yesixhobo.
U-Sony utyhila ukuba zeziphi iifowuni eziza kuba zezokuqala ukuzihlaziya kwi-Android 9.0 Pie
Iifowuni zakwaSony eziza kufumana iPie ye-Android 9.0 ivezwe kungekudala. Fumanisa ukuba yeyiphi imodeli eya kuba yeyokuqala ukufumana uhlaziyo.
I-Moto P30 entsha inokuboniswa ngo-Agasti 15
IMotorola iya kuzisa iiMoto P30 nge-15 ka-Agasti. Fumana ngakumbi malunga nolu luhlu lutsha lweefowuni ezivela kuhlobo, oluza kufika kungekudala.
Isamsung iphinda igxeke iApple ngeentengiso zayo ezintsha
Isamsung iphinda ihlawulise iApple kwiintengiso zayo. Fumanisa ngakumbi malunga nokugxekwa kwenkampani yaseKorea ngezi zibhengezo zeGalaxy Note 9.
Ezona Phones zinamandla zi-10 zikaJulayi 2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark
I-AnTuTu isizisela inqanaba lee-smartphones ezili-10 ezinamandla zenyanga kaJulayi kulo nyaka, ekukho kuzo iXiaomi Black Shark nabanye.
IXiaomi Mi A2 kunye neMi A2 Lite sele zikhona eSpain
IXiaomi Mi A2 kunye neMi A2 Lite zisungulwe ngokusemthethweni eSpain. Fumana okunye malunga nokufika kweefowuni ezimbini eSpain.
ENCINANE: Uphawu olutsha lweprimiyamu kaXiaomi
ENCINANE: Uphawu olutsha lwefowuni ephezulu kaXiaomi. Fumana ngakumbi malunga nolu kraca lutsha luboniswe yinkampani yaseTshayina namhlanje.
INetflix ye-Android kwi-HD / HDR yeefowuni ezintsha
I-Netflix ihlaziya uluhlu lweefowuni ezihambelana ne-HD / HDR. Fumana ukuba zeziphi iifowuni ezintsha ze-Android eziqinisekisiweyo.
Isundu siya kubuyela kwi-Android ngefowuni enobungakanani obuncitshisiweyo
Isundu siza kuvula ifowuni encinci ye-Android. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca eza kubuyela kwintengiso.
I-Bixby 2.0: Umncedisi we-Samsung uyahlaziywa
I-Bixby 2.0: Umncedisi we-Samsung uyaphucula kwaye uyahlaziywa. Fumanisa ngakumbi malunga notshintsho olwenziwa kwiWisile yaseKorea.
Ikhamera yasekhaya yekhamera ye-YI Pack 2 kuVavanyo olu-1
Sivavanye ikhamera yeKhaya ye-Y kwi-2-in-1 "ipakethi yosapho" enika ukusebenza okunomdla, isixhobo esifanelekileyo sokuba nayo yonke into iphantsi kolawulo
I-Samsung Galaxy Watch: Ukuhlaziywa kweewotshi zeSamsung
I-Samsung Galaxy Watch: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa. Fumanisa ngakumbi malunga newotshi entsha evela kuhlobo lwaseKorea oluboniswe namhlanje.
I-Samsung Galaxy Note 9 ngoku ifumaneka kwiOrange
I-Samsung Galaxy Note 9 sele ifumaneka njenge-oda yangaphambi kweOrange yaseSpain kwiindidi zayo ezimbini ze-RAM kunye neROM.
Isamsung yazisa isithethi sayo sokuqala esinobuqili ngeBixby, umncedisi wenkampani
Isamsung isandula ukwazisa isithethi sayo sokuqala esinobuqili, kwaye ibizwa ngokuba yiGlass Home. Kuza neBixby, umncedisi wohlobo lwentengiso.
I-Samsung Galaxy Qaphela 9: Ukucaciswa kunye neempawu
Emva kweenyanga ezininzi zamarhe, u-Agasti 9 sele efikile, umhla apho bonke abathandi boluhlu lweNqaku babelinde ukubona ukuba inkampani yaseKorea i-Samsung isandula ukwazisa ngokusesikweni i-Samsung Galaxy Note 9, eyona flegi yamva nje eza kubakho kulo nyaka .
I-Huawei Mate 20 iya kuba nebhetri ye-4.200 mAh
I-Huawei Mate 20 iya kuba nebhetri ye-4.200 mAh. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina oluza kufika kolu ukuwa.
U-Huawei uvavanya i-Android 9.0 Pie kwiifowuni zayo ezine
IHuawei sele isebenza kwiPie ye-Android 9.0 yeefowuni ezine. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo olulungiselelwe uphawu lwaseTshayina.
IXiaomi Mi 8X yesatifikethi se3C, ezintathu ezahlukeneyo ziyavela
Ukuvuza okutsha kunokubonisa ukuba iXiaomi Mi 8X iya kuba nezinto ezimbini ezahlukeneyo, inokuba yiMi 8 kunye neMi 8 SE
I-BQ iya kuhlaziya iifowuni ezili-10 kwiPie ye-Android 9.0. Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni eziza kukwazi ukuzihlaziya kuhlobo olutsha lwenkqubo yokusebenza.
Imakethi yamacwecwe, emva kwexesha lokuqala apho bonke abavelisi bazisa iimodeli zabo kwintengiso, incitshisiwe yaya Emva kweeveki zokulinda, iAlldocube X iyafumaneka ngoku ukubhukisha ngenkampani yokubuyiselwa kwemali efumanekayo eIndiegogo.
Sinedatha entsha evela kwi-Fortnite yethutyana ye-Samsung Galaxy Note 9
I-Asus Zenfone Max Pro izakufika eSpain kungekudala. Ifowuni entsha ye-ASUS esebenzisa i-Android emsulwa njengenkqubo yayo.
Iimpawu ze-Oukitel WP2 kunye neeNkcukacha
Xa kuthengwa i-smartphone, uninzi lwabasebenzisi luthathela ingqalelo izinto ezahlukeneyo, ngakumbi ukuba ngaba baceba ukuyinika, inkampani yaseAsia i-Oukitel, imalunga nokuqalisa i-terminal entsha ene-10.000 mAh kwintengiso.
Meizu 16 kunye 16 Plus: amanqaku kunye namaxabiso eeflegi ezintsha zohlobo
UMeizu usanda kukhupha iMeizu 16 kunye ne-16 Plus. Fumanisa zonke iinkcukacha zobuchwephesha kwiifowuni ezintsha zenkampani!
Ukuhlaziywa kweBluetooth yentloko yeAermoo B3
Sivavanye ukubetha kweentloko zeAermoo B3, kwaye kolu hlalutyo siza kukuxelela yonke idatha kunye namava ethu okusetyenziswa iintsuku ezimbalwa.
I-HTC irekhoda ityala layo elibi kakhulu kwiminyaka eli-15
Ingeniso yeHTC yehle ngama-77% ngoJulayi. Fumana ngakumbi malunga nokwehla kwengeniso yenkampani yaseTaiwan.
I-Fossil iya kuzisa ii-smartwatches zayo ezintsha kwi-IFA 2018
I-Fossil iya kuzisa i-smartwatch sayo sesine kwi-IFA 2018. Fumana ngakumbi malunga neewotshi ezintsha zomenzi eziza kungekudala.
I-Qualcomm yazisa iprosesa yayo entsha ye-smartwatch ngo-Septemba
I-Qualcomm iza kwazisa iprosesa yayo entsha ye-smartwatch ngo-Septemba 10. Fumanisa ngakumbi malunga ne-brand Snapdragon entsha.
Ezinye iifowuni ze-Samsung kuya kufuneka zilinde de kube li-2019 ukufumana i-Android Oreo
Isamsung iya kuhlaziya ezinye iifowuni kwi-Android Oreo ngo-2019. Fumana ngakumbi malunga neshedyuli yokuhlaziya uphawu.
Imifanekiso emitsha kunye nedatha emalunga nePocoPhone F1
Ukucaciswa okutsha kunye nemifanekiso evuzayo malunga nePocoPhone F1. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni esuka kuhlobo olutsha lweXiaomi.
Ibhokisi yeSmartisan Nut Pro 2S ityhila iimpawu zayo eziphambili
Iimpawu eziphambili zeSmartisan Nut Pro 2S zisandula ukubulela kwinkcazo yebhokisi yayo. Bazi ngakumbi!
I-Meizu 16 ifikelela kwisigidi esinye sokubhukisha
I-Meizu 16s ifikelele kwindawo enye e-China. Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo yezi modeli ngaphambi kokuba zingeniswe.
Ukucaciswa kobuchwephesha obutsha beLeagoo S10 kuqinisekisiwe
ILeagoo ityhile iinkcukacha ezingakumbi malunga nefowuni elandelayo, iLeagoo S10. Iya kuza nescreen se-AMOLED kunye nekhamera ngasemva kabini. Fumanisa!
Ukucoca imifanekiso yokuqala yeXiaomi Mi 8X
Xiaomi Mi 8X: Umlandeli omtsha kuluhlu lweMi Qaphela. Fumana ngakumbi malunga nale fowuni enemifanekiso esele ivuza.
Iifowuni ezininzi ze-Android zineengxaki ngomyalelo "Kulungile, Google"
Iifowuni ezininzi ze-Android azinakho ukusebenzisa umyalelo othi "Ok Google". Fumana ngakumbi ngale bug echaphazela abasebenzisi abaninzi.
Uhlaziyo lwefowuni olubalulekileyo kwiPie ye-Android 9.0
Ifowuni ebalulekileyo ngoku ihlaziya kwi-Android 9.0 Pie. Fumana ngakumbi malunga nefowuni engowokuqala ukufumana uhlaziyo.
I-LG Q8 (2018): Uluhlu olutsha olungamanzi ngaphakathi
I-LG Q8 (2018): Ukucaciswa, ixabiso kunye nokumiliselwa kwinqanaba eliphakathi. Fumana ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi oluphakathi lwegama laseKorea.
Ifowuni yeRazer 2 inokumiliselwa ngasekupheleni kwe2018
Ifowuni entsha yeRazer iya kuphehlelela kamva kulo nyaka. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwemodeli entsha kraca yokuphela konyaka.
UGoogle ngewayevezile umhla wokubonisa iPixel 3
I-Google Pixel 3 iya kuboniswa ngo-Okthobha u-4. Fumana ngakumbi malunga nokunikezelwa okusemthethweni kweefowuni zikaGoogle.
I-OnePlus 6 iya kulungisa iingxaki zescreen sakho kuhlaziyo lwayo olulandelayo
Uhlaziyo luya kukhutshwa ukulungisa ukubengezela kwescreen se-OnePlus 6. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo oluza kukhutshwa ngumenzi waseTshayina.
I-Qin AI, iXiaomi entsha ene-Android malunga nama-euro angama-25
UXiaomi usandula ukwazisa iQin AI, isixhobo esitsha sentsingiselo ye-Android esixabisa malunga nama-25 euros ukutshintsha. Yazi!
I-Asus Zenfone 5Z ifumana ukuphuculwa okungafaniyo kunye neempawu zekhamera kuhlaziyo olutsha
I-Asus Zenfone 5Z eboniswe ekupheleni kukaFebruwari kwi-MWC e-Barcelona isandula kufumana uhlaziyo olutsha kunye nophuculo kwicandelo lokufota.
I-Huawei Mate 10 ithengise ngaphezulu kweeyunithi ezizigidi ezili-10
Kuthengisiwe ngaphezulu kweeyunithi zezigidi ezili-10 zeHuawei Mate 10.Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso ephezulu yeshishini laseTshayina.
INokia 5.1 Plus iza kuphehlelelwa kungekudala kumazwe aliqela
INokia 5.1 Plus iya kufumaneka ngaphandle kwe China kungekudala. Isixhobo sisandula ukufumana isatifikethi seBluetooth. Siyakwandisa!
IMotorola ayizukushiya iiMoto Mods
IMotorola ayizukushiya uphuhliso lweMoto Mods. Fumana ngakumbi malunga nokuqinisekiswa kwenkampani ukuba iya kuqhubeka nokusebenza kwiMods Mode.
Uku-odola kwangaphambili kweGPS 9 iza kuza ne- $ 150 yokuchitha kwi-Fortnite
Uku-odola kwangaphambili kweGalaxy Note 9 kuza kuza nemali oza kuyichitha kwi-Fortnite. Imidlalo ye-Epic kunye ne-Samsung bayazibandakanya ekukhuthazeni iimveliso zabo.
Isibhengezo: Akusayi kubakho zixhobo zeMoto Z kulo nyaka
IMotorola ibhengeze nje ukuba akusayi kubakho zixhobo zeMoto Z kulo nyaka. Oku kubhengezwe kungekudala emva kokunikezelwa kweMoto Z3.
Sebenzisa eli thuba kwaye uthenge i-Chuwi Hi 9 Pro nge- $ 139,9 kuphela yexesha elimiselweyo
Nangona kuyinyani ukuba ukubuyela esikolweni kusele into engaphaya kwenyanga kwaye uninzi lwabafundi alufuni kuva ngesi sihloko, ukuba ubulindele isipho sokuthenga ithebhulethi enomdla ngaphezulu kwexabiso elinomdla, iChuwi Hi9 Pro inokuba yeyona uyifunayo
Isamsung iya kuba kwi-IFA 2018 kunye neemveliso ezintsha
Isamsung iza kuzisa iimveliso ezintsha e-IFA 2018. Fumanisa ngakumbi malunga nezinto ezintsha eziza kubakho kwifemu yaseBerlin.
Ukunikezelwa kobomi beHTC U12, uhlobo oluphakathi kwinqanaba lebrendi, kuhluziwe
Ukunikezelwa kobomi be-HTC U12, umvelisi we-smartphone ophakathi ophakathi we-smartphone, sele evuziwe. Yazi!
IXiaomi Mi MIX 2S iya kuhlaziya ngokuthe ngqo kwi-Android P
IXiaomi Mi MIX 2S iya kufumana ngokuthe ngqo i-Android P. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo oluza kuza kwifowuni kungekudala.
Isiqwenga sokhuseleko esihambelana nale nyanga ka-Agasti sisandula ukukhutshwa nge-Samsung Galaxy S8, S9 kunye neNqaku 8.
Uluhlu olupheleleyo lweenkcukacha zobuchwephesha ze-Samsung's Galaxy Note 9, ifowuni enkulu eya kuthi ithi thaca kwi-9 elandelayo iza kukhanya.Ukucaciswa kobuchwephesha kwi-Samsung yeNqaku le-9 le-Samsung kusandula ukuvuza nje kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokunikezelwa kwayo ngokusemthethweni.
U-Oppo uza kusizisela i-smartphone yokuqala kwintengiso kunye neCorning Gorilla Glass 6, njengoko kusandula ukwaziswa.
I-Google Pixel 3 XL ivuza kwiGeekBench: I-Android P ityhilwe
I-Google Pixel 3 XL yagqitywa nje kwiGeekbench. Esi sixhobo siqhayisa nge-Android P, i-4GB ye-RAM kunye neprosesa engundoqo yesibhozo yeQualcomm.
Isibhengezo sokuqala seGalaxy Note 9 sihluziwe
Njengoko kulindelwe, ngakumbi ukuba sithetha ngeSamsung, xa zikhona nje iintsuku ezimbalwa ...
IMotorola isungula iMoto Z3 ngenzwa yeminwe esecaleni kunye neMoto Mod ye5G
I-Moto Z3 ingeniswe ngokusesikweni, sikuxelela zonke iinkcukacha, isivamvo somnwe kwicala kunye neMoto Mod yenethiwekhi ye5G.
I-Oppo A3s: yazisa ingxelo entsha ye-3GB ye-RAM + 32GB yememori yangaphakathi
U-Oppo usandula ukubhengeza ingxelo entsha ye-Oppo A3s ene-RAM ephezulu kunye namandla okugcina ngaphakathi.
I-AUKEY izisa «ihlala ibhetri kwiselfowuni»
Sivavanye ipakethi epheleleyo ye-AUKEY ukuze ibhetri yee-smartphones zethu zikwazi ukumelana nohlobo ngexesha leeholide, ngokuqinisekileyo enye yazo iyakulungela
Funda malunga noyilo lweHuawei's Mate 20 Lite emva kokudlula kwi-TENAA
I-Huawei Mate 20 Lite idlulile kwi-TENAA kwaye ifumene isatifikethi. Siyabulela oku, sele siyazi uyilo lwayo olusemthethweni. Siyakubonisa!
Ukujonga kwakhona iGPS yexabiso eliphantsi I-Smartwatch Leo Sport Sp958. Ngoku enkosi kwisaphulelo sekhuphoni. Ngee- € 56.75 !!
IXiaomi Mi 8 izakufika eSpain nge-8 ka-Agasti
IXiaomi Mi 8 izakwaziswa eSpain nge-8 ka-Agasti. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokuqaliswa kwesiphelo esiphakamileyo kwilizwe lethu.
Iimpawu ze-Samsung Galaxy Tab A 10.5, entsha evela eMzantsi Korea
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, iSamsung yazisa ngeGalaxy Tab S4, elona cwecwe lilungileyo lenkampani ukuza kuthi ga ngoku elixhobisa iprosesa ye-Snapdragon 835. Oku akuzange kufike i-Samsung isizisela ithebhulethi yayo entsha. Le yiGalaxy Tab A 10.5, isixhobo esinikwe amandla yi-Snapdragon 450 engundoqo ezisibhozo ezivela kwiQualcomm.
Oyena mvelisi we-smartphone uphumeleleyo usizisela ithebhulethi yakhe entsha. Sithetha nge-Samsung Galaxy Tab S4, eyindlalifa kwi-Galaxy Tab S3 Dibana ne-Samsung ithebhulethi entsha: i-Galaxy Tab S4. Le iza ne-Snapdragon 835 SoC, isikrini esikhulu se-10.5-intshi SuperAMOLED, nokunye okuninzi.
Nge-9 ka-Agasti, inkampani yaseAsia i-Samsung izakunikezela ngokusesikweni i-Galaxy Note 9, kwaye nangona uninzi lweenkcukacha esele zikhona nangona ingekabikho ukuthengiswa, i-Samsung Galaxy Note 9 sele igcinwe kwi Eunited States.
IGreen Note 9 ibonakala kwividiyo evuzwe yiMobileFun
Nangona kusekho iveki kwaye kusekho enye into encinci yokunikezelwa ngokusesikweni kweGlass Note 9, imifanekiso kunye neevidiyo zisabonakala apho ukuba ufuna ukubona ukuba i-Galaxy Note 9 izakujongeka njani, abafana kwi-MobileFun banakho ukufikelela kwividiyo Kwisizukulwana esitsha soLuhlu lweNqaku.
Uyilo lwangasemva lwe-Oppo F9 luqinisekisa ikhamera ephindwe kabini kunye nesifundi seminwe
I-Oppo F9 zizixhobo ezilandelayo zokumiliselwa kwinkampani yaseTshayina. Ezi sele zityhilile inotshi encinci kunye neyobukekayo kwityala I-Oppo F9 ityhile uyilo lwayo lwamva kamva kubulelwa iiposta ezimbini ezintsha ezisemthethweni. Lo uya kuza ngemibala emibini eyahlukileyo: luhlaza okwesibhakabhaka nobomvu.
I-Xiaomi yayiyeyona nkampani inokukhula okuphezulu kwikota yesibini yalo nyaka
Namhlanje, enye yezona zinto zidumileyo kwaye zinzima kwimarike yiXiaomi. Oku akuphumelelanga kuphela ekufumaneni imbeko kunye nokukhethwa kweXiaomi, yinkampani yaseTshayina enolona phuhliso luphezulu lufunyenwe phakathi kwenyanga ka-Epreli noJuni walo nyaka. Sineenkcukacha ngeendaba!
Ixesha lokubhukisha i-Oukitel K8 ngoku livulekile
Inkampani yaseAsia iOukitel ibonakaliswe kule minyaka idlulileyo ngokuvelisa iifowuni ezineempawu ezinomdla ngexabiso elingaphezulu kwexesha lokubhukisha i-Oukitel K8 ngoku ivulekile, i-terminal enenzwa yokufota eyenziwe yi-Sony kunye ne-5.000 mAh ibhetri.
AbakwaSony bathengise iifowuni ezizigidi ezi-2 kwikota yesibini yalo nyaka
Sele iyinyanga ukusukela kwikota yesibini yonyaka ukuba kuthi ndlela-ntle kuthi, kuxhamle abanye abavelisi bee-smartphone ngelixa abanye beshiyeke kuphela.USony ubhalise kuphela iiyunithi ezizigidi ezibini ezithengiswe kwikota yesibini yonyaka. Oku kubonisa ukuwa okukhulu. Fumanisa!
IHuawei ikwindawo yesibini ethengisa kakhulu kwihlabathi liphela
IHuawei idlula iApple kwintengiso kwikota yesibini. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso yomenzi waseTshayina kule kota yesibini kwihlabathi liphela.
Iselfowuni ka-Huawei ye-5G iza kusebenzisa inkqubo yokupholisa ehambele phambili
Sineenyanga nje ezimbalwa ukusuka ekunikeni ubungqina ngetekhnoloji ye-5G kwii-mobiles ezahlukeneyo. Abavelisi abanjengoHuawei sele bevakalisile ngokusekwe kwe-Huawei baya kusebenzisa inkqubo yokupholisa esekwe kwisitya sobhedu sokuhambisa ubushushu ngenxa yokusetyenziswa kwenethiwekhi ye-5G.
I-Xiaomi Mi 8 Edition yoHlolo iya kudlula kwi-TENAA ngenotshi encitshisiweyo
Esinye sezixhobo esitsale ingqalelo kakhulu ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, kwaye hayi kangako ngeempawu okanye izibonelelo, kodwa kuyilo lwayo uXiaomi ubhalise isixhobo kunye ne-TENAA. Ngokwedatha ebonelelweyo, inokuba yinguqulelo yohlelo lweMi 8 Explorer.
Iinkcukacha ezininzi zobuchwephesha zeHuawei Mate 20 zihluziwe zibulela kwi-firmware yayo
Njengoko iintsuku zihamba, kukhutshwa iinkcukacha ezithile malunga neflegi elandelayo yenkampani yaseTshayina iHuawei, ezinye zixhomekeke kwi-firmware yeHuawei Mate 20 iye yavuza iiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Yazi zonke iinkcukacha zobuchwephesha ezityhiliweyo!
Inethiwekhi ye-5G yenye yezona zinto zilindelweyo kwezobuchwephesha kwiifowuni eziphathwayo, kuba, njengoko sisazi kakuhle, ayikaxhaswa naphina Ngokutsho kwengxelo enikezwe ngusekela mongameli wenkampani, u-Chang Cheng, uLenovo uzakusizisela i-5G yokuqala ifowuni kunye ne-Snapdragon 855.
OPPO F9: Ukuvela kwenotshi sele kuyinyani
I-OPPO F9: Uluhlu olutsha lwephakathi kunye nenotshi ekhethekileyo. Fumanisa okungakumbi malunga nale modeli intsha ivela kumvelisi oza kuthi ungene kwimarike kungekudala.
Fumana icwecwe elimnandi leAlldocube X nge- $ 219 nje
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo besithetha ngecwecwe elitsha elaliza kubona ukukhanya, iAlldocube X, a ...
I-Huawei Mate 20 Pro iya kuba nenzwa ye-ultrasonic kunye ne-3D yokuvula ubuso
Sikuxelela iinkcukacha ezintsha ezithe zavela malunga neHuawei Mate 20 Pro entsha
I-OnePlus 3 kunye ne-3T ziya kufumana i-Android P
Kungekude kudala i-OnePlus ibhengeze ishedyuli yayo yokuhlaziya, eqinisekisa iminyaka emibini yohlaziyo oluqhelekileyo ...
IXiaomi isebenza kwifowuni yayo esongekileyo
IXiaomi sele isebenza kwi-smartphone yayo esongelayo. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zorhwebo lwaseTshayina lokumilisela le modeli yokusonga kunyaka olandelayo.
I-Sony Xperia XZ3 ixelwe kwi-TENAA
U-Sony ebezakuthi abonise i-Xperia XZ3 e-IFA eBerlin, eJamani, umboniso weteknoloji odumileyo apho izixhobo zobugcisa zihlala ziveliswa khona.Umntu ekucingelwa ukuba ngu-Sony Xperia XZ3 wenze nje ukubonakala kutsha nje kwiwebhusayithi esemthethweni ye-TENAA. Funda nzulu malunga nesi sixhobo!
I-Samsung Galaxy A (2019) iya kuba nekhamera kathathu
Isamsung yazisa ikhamera yangasemva kathathu kwiGlass A (2019). Fumanisa ngakumbi malunga neyona nto iphambili kwezi fowuni kumenzi.
I-Oukitel WP2 sisizukulwana sesibini se-WP10000
Ifemi ye-Oukitel ibonakaliswa ngokusungula uluhlu lweefowuni ezinamandla amakhulu ebhetri kunye ne ...
IXiaomi Pocophone F1 ityhila iinkcukacha ezithile emva kokuqinisekiswa kweBluetooth
Kuninzi okuye kwahletywa malunga nokuphela okuphezulu okulandelayo kukaXiaomi. Esi sixhobo, iPocophone F1, senze utyelelo kwiBluetooth SIG, apho iXiaomi Pocophone F1 ihamba ngeBluetooth SIG kwaye iqinisekisiwe. Funda ngakumbi malunga neenkcukacha zobuchwephesha boku kulandelayo-isiphelo esilandelayo ngeSpapdragon 845.
Isamsung yazisa esayo Iscreen esingenakuqhekeka
Isamsung yadala isikrini esingenakuqhekeka esichasene neglasi yeGorilla. Fumanisa ngakumbi malunga nescreen esingenakwaphuka esenziwe yimpawu yaseKorea.
Ngezi zibhengezo zintathu ezihlekisayo, i-Samsung igxeka eminye imisebenzi kunye neempawu ze-iPhone
Inkampani yaseKorea i-Samsung, njengabanye abavelisi abaninzi, ihlala ine-Apple ye-Apple njengereferensi, nokuba iyithelekise nenkampani yaseKorea i-Samsung ipapashe izibhengezo ezintathu ezintsha apho ibalaselisa khona izinto ezintathu esizifumana kwiitheminali zazo esingazifumaniyo. Iphone
Ezi zii-smartphones ezihambelana neFortite kwi-Android
Ngaphaya kwiveki ephelileyo, abafana abavela kwi-XDA Developers babhengeze ukuba yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba uSomandla uSamuel ufikelele kwisivumelwano kunye Ukuba ufuna ukwazi ukuba i-terminal yakho iya kuhambelana neFortnite xa kuziwa kwi-Android, siyakubonisa zeziphi iimodeli ezihambelanayo.
Ukuqaqamba okuzenzekelayo kwe-OnePlus 6 kubangela iingxaki
Ukuqaqamba okuzenzekelayo kubangela iingxaki kwiscreen se-OnePlus 6. Fumana ngakumbi malunga neengxaki abanazo abasebenzisi.
Kuvuza ixabiso le-Samsung Galaxy Note 9 ye-128 GB kunye ne-512 GB
Ngoku siyazi ixabiso kunye nemibala ye-Galaxy Note 9 eya kufika e-Indonesia
Imbeko Dlala uHlelo oluKhethekileyo lokuSungula ngo-Agasti 1
UHlaziyo lokuDlala oluKhethekileyo luya kukhutshwa ngo-Agasti 1. Fumana ngakumbi malunga nokufika kolu hlelo lukhethekileyo lweNhlonipho yefowuni kwintengiso.
I-Samsung Galaxy Tab S4 iya kuziswa ngo-Agasti 1
I-Samsung Galaxy Tab S4 iya kuziswa ngo-Agasti 1. Fumana ngakumbi malunga nomhla wenkcazo yecwecwe lenkampani yaseKorea.
I-Moto Z3 iya kuziswa nge-2 ka-Agasti
I-Motorola Moto Z3 iya kuziswa ngokusemthethweni nge-2 ka-Agasti. Fumana ngakumbi malunga nomhla wokufayilisha okhethwe yinkampani.
I-Kirin 980 inokuboniswa ngo-Agasti 31
I-Kirin 980 iya kuziswa nge-31 ka-Agasti kwi-IFA 2018. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokunikezelwa kweprosesa ephezulu ye-Huawei.
I-Honor Qaphela i-10 ngoku inokugcinwa e-China
Kutyhilwe ukucaciswa ngokusemthethweni kweNqaku eliHloniphekileyo le-10. Fumana ngakumbi malunga nesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina oluza kufika kwiveki ezayo.
Ngaphandle kokugxekwa kunyaka ophelileyo, iPixel 3 XL iyakwamkela inotshi kwaye ijongeka ngoluhlobo
Abavelisi bamatyala bahlala bengabokuqala ukufikelela kwiiterminal ezintsha eziza kufikelela kwintengiso, ubuncinci ulwazi oluyimfuneko.Imifanekiso yokuqala yeGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3XL ziye zavuza ngokusebenzisa umenzi wecala.
Ividiyo yokuqala yeGalaxy Tab S4 ivuliwe
Isizukulwane esitsha seGalaxy Tab S, sele siza kuziswa ngokusesikweni, nangona okwangoku, inkampani yaseKorea ingawuqinisekisanga umhla wayo Ividiyo yokuqala yeGalaxy Tab S4 isandula ukuvuza, ividiyo eqinisekisa ukuqhubeka uyilo kunye nokunyamalala kwenzwa yeminwe.
Inqaku le-Honor 10 liya kuba nebhetri ye-5.000 mAh
Inqaku le-Honor 10 liya kufaka ibhetri ye-5.000 mAh. Fumanisa okungakumbi malunga nebhetri eya kuba nayo ifowuni entsha evela kumenzi waseTshayina.
Ezi ziimpawu ze-Samsung Galaxy Tab A2 XL
Sikuxelela zonke iinkcukacha ezisemthethweni zethebhulethi elandelayo ye-Samsung Galaxy Tab A2 XL
Iividiyo zokuqala zentengiso zeGalaxy Note 9
Nge-9 ka-Agasti, inkampani yaseKorea iya kuthi ngokusesikweni ibonise i-Galaxy Note 9, isiphelo sendlela ezimbalwa ...
I-OPPO Fumana i-X yenza olona vavanyo ludumileyo lokunyamezela
I-OPPO Fumana i-X iyasilela kuvavanyo lwento yonke kaJerryRigEverything. Ufumana uvavanyo olwaziwayo ngeziphumo ezibi emnxebeni.
Ukuphonononga i-YI gimbal ye-smartphone
Sivavanye i-YI gimbal ye-smartphone, isixhobo sokuzinzisa iividiyo zakho ezihambayo nangayiphi na imeko. Ngaba ihambisa oko ikuthembisayo?
I-TENAA iqinisekisa ukuba i-Meizu 16 iza kuza ne-sensor yeminwe edityaniswe kwizikrini
Kungekudala siza kubona umboniso weMeizu 16, iiflegi ezilandelayo zenkampani yaseTshayina eziza kufika ngo-Agasti ukunika i-TENAA iqinisekisile ubukho bomfundi weminwe phantsi kwescreen kwi-Meizu 16. Siyakwandisa!
IHuawei iziseka njengeyona nto ithengiswa kakhulu e-China
IHuawei inyusa ukuthengisa kwayo kwaye iyazidibanisa njengeyona nto ithengisayo eTshayina. Fumana ngakumbi malunga nokuthengisa kwebranti kwilizwe lakho.
Ushicilelo lweXiaomi Mi 8 Explorer luya kuphehlelelwa nge-30 kaJulayi e-China
I-Xiaomi Mi 8 Edition Edition izakwaziswa e-China ngoJulayi 30 ngokusemthethweni. Emva kweeveki zemfihlo, siyazi ukuba iza kufika nini kwintengiso.
IVLC ayixhaswanga nguHuawei !! Sikunika isisombululo kwividiyo kwaye sicacisa ukuba kutheni
IVLC ayisasebenzi kuHuawei yiyo loo nto isicelo siyekile ukuvela kwiVenkile yokuDlala. Sikuxelela isizathu sale meko kunye nesisombululo.
Ngaphandle kongquzulwano lwakutsha nje lwe-ZTE ne-United States, inkampani yaseTshayina ayiphelisi ukusebenza kwayo phesheya, kwaye ingaphantsi kwelizwe labo lokuzalwa. Nangona kunjalo, isixhobo esitsha seZTE sibhalisiwe kwiziko ledatha le-TENAA phantsi kwekhowudi yemodeli A0722. Funda ngakumbi malunga neenkcukacha zobuchwephesha.
I-ZTE inokunyanzelwa ukuba itshintshe igama layo ibuyele ekusebenzeni. Fumana ngakumbi malunga neemeko ezimiselweyo kwinkampani yaseMelika.
U-Huawei usandula ukwazisa i-P Smart +, i-smartphone entsha eyenzelwe abathandi bezithombe. Esi sixhobo siza nezinto ezithile uHuawei usizisela i-P Smart +, i-brand entsha ye-brand yekhamera eneekhamera ezine kunye neQualcomm Snapdragon 710.
I-Fortnite ye-Android iza kuza kuphela kwi-Samsung Galaxy Note 9
I-Fortnite iya kuba yinto ekhethekileyo kwi-Galaxy Note 9 kwinyanga yokuqala. Fumanisa ngakumbi malunga nesivumelwano ebesinokufikelela kuwo omabini la maqela ukumiliselwa kwawo.
Ezona mpawu ziphambili ze-Motorola One Power emva kokudlula kwi-TENAA
IMotorola, inkampani efunyenwe nguLenovo kwiminyaka embalwa eyadlulayo, sele iza kusazisa ngesixhobo esitsha: iMotorola One Power, indawo ekumgangatho ophakathi olandelayo weMotor One Power iqinisekisiwe yiTENAA. Funda ngakumbi malunga neenkcukacha ezisemthethweni zesi sixhobo saphakathi.
I-Sony Xperia XZ3 inokufika ngenzwa ye-48MP
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, uSony, inkampani yaseJapan, thaca isisombululo sayo sefoto esine-48 megapixel sensor. Oku kwaziwa njengeSony IMX586. Isixhobo esisesikaSony sivele nje kwiGFXBench. Oku kunokuba yi-Sony Xperia XZ3, iflegi elandelayo yenkampani.
Ubomi beHTC U12: idatha ephambili yesiphelo sendlela elandelayo yenkampani ihluziwe
I-HTC ibonakala izinzile kakhulu okanye, kunoko, kuphela kuthotho lwayo lwe-U12 okoko, kutshanje, idatha ebalulekileyo yesixhobo sayo esilandelayo sele ivuliwe.Iimpawu ezininzi kunye nokuchazwa kobuchwephesha bobomi beHTC U12, indawo ephakathi elandelayo yenkampani yaseTaiwan. , ziyavuza.
IMoto C2 kunye neC2 Plus sele ziqinisekisiwe
I-Moto C2 kunye neC2 Plus ziqinisekisiwe eBrazil. Fumanisa ngakumbi malunga neemodeli ezintsha zorhwebo eziza kubakho kwintengiso kungekudala.
Umdlalo weHonor uza kufika eIndiya njengeAmazon ekhethekileyo
Umdlalo oHloniphekileyo uza kufika eIndiya kwinyanga ezayo kwaye ngoku siyazi ukuba iyakwenza oko kuphela ngeAmazon.
UXiaomi uqinisekisa ukuba akuyi kubakho Xiaomi Mi Max 3 Pro
Kusemthethweni: IXiaomi Mi Max 3 Pro ayizukumiselwa. Emva kweentsuku ezimbalwa ngamarhe amaninzi, sele sinesiqinisekiso emnxebeni.
I-Ulefone Armor 5, iselfowuni eyomeleleyo nenotshi, ibhengezwe ngokusesikweni
I-Ulefone isandula ukubhengeza i-Armor 5, iselfowuni eyomeleleyo eza kufika inezinto ezintsha ezingazange zibonwe ngaphambili kwizixhobo eziphikisayo zolu ngcelele: I-Ulefone Armor 5 isandula ukubhengezwa ngo-Agasti 6, umhla eyakuba ngawo ngokusemthethweni Imarike yaseYurophu.
Xiaomi Redmi Qaphela 5: eyahlukileyo i-6GB + 128GB eyahlukileyo ifika
I-Xiaomi, enkosi kwimpumelelo eyenziwe yiRedmi Qaphela 5 kungekudala, kwaye isizisela into entsha ene-6GB ye-RAM kunye ne-128GB yeROM Xiaomi isizisela inguqulelo entsha yeRedmi Qaphela inkumbulo 5: I-6GB ye-RAM ene-128GB yangaphakathi indawo yokugcina.
I-LG V20 iqala ukufumana uhlaziyo kwi-Android Oreo
Kule minyaka mibini idlulileyo, kwaye emva kokungaphumeleli kweemodyuli ze-smartphone ezazisungulwe yinkampani, zasilela ngokwentengiso kuba umbono wawunjalo Ukuhlaziywa kwe-LG V20 kwi-Android Oreo sele kukufikela kwimarike, emva kokufumaneka kwayo kokuqala eMzantsi Korea.
Uhlaziyo kwi-Android Oreo yeGlass A, C kunye no-J abayi kufika kude kube nguDisemba
Ayisiyiyo enye yeenkampani ethi, ngelishwa, ihlawule ingqalelo ekhethekileyo yokuhlaziya izixhobo zazo kwiinguqulelo ezintsha ze-Android. Isamsung ipapashe ngokusesikweni umhla apho ezinye iiterminal zayo ziya kuhlaziywa kwi-Android Oreo, umhla oya kuba semva kokumiliselwa kwe-Android P
I-LG sele ibhalisile igama le-LG V90
AbakwaLGG bazakusungula ubuncinci izizukulwana ezintlanu ze-LG V. Fumanisa ngakumbi malunga nokubhaliswa kwe-LG V90 yinkampani yaseKorea
Abasebenzisi baxela iingxaki kwibar yokukhangela yeGoogle Pixel 2
Ufumanise ingxaki kwibar yokukhangela yeGoogle Pixel. Fumana ngakumbi malunga nale bug echaphazela abasebenzisi kwifowuni kaGoogle
Isamsung yathweswa isithsaba njengeyona nto ithengiswa kakhulu eIndiya
Isamsung yeyona nto ithengiswa kakhulu eIndiya kwikota yesibini. Fumana ngakumbi malunga nokuthengisa kwegama laseKorea kwezi nyanga zintathu.
I-Sony Xperia XZ3 inokuba nekhamera enye
I-Sony Xperia XZ3 iya kuba nekhamera enye njengoko ibonwayo ekunikezelweni kwayo. Fumanisa uyilo lwefowuni kunye nobukho bekhamera enye.
I-Meizu 16 kunye ne-16 Plus zidlula kwi-TENAA: iimpawu eziphambili zibonisiwe
I-Meizu 16 kunye ne-16 Plus, i-duo elandelayo yenkampani yaseTshayina, zisandula ukubonakala ku-TENAA, isiqinisekiso saseTshayina, kwiiflegi ezilandelayo zeMeizu, iMeizu 16 kunye ne-16 Plus, zisandula ukuvuza kwi-TENAA kunye iimpawu eziphambili. Bazi ngakumbi!
I-Xiaomi isungula iXiaomi Mi A2 Lite, kwabo bafuna inotshi ebomini babo nakwi-Android One
Ukuba ufuna olona hlobo lwexabiso eliphantsi losapho lweMi A2, sele unayo iLite ene-Android One kunye nenotshi ehleli kwiscreen esiphathwayo.
IXiaomi Mi A2 ngoku isemthethweni: ibanga eliphakathi eliphakathi, nangona lingenayo i-audiojack yeefowuni
UXiaomi usebenzise isixeko saseMadrid ukwenza umboniso wehlabathi weXiaomi Mi A2 ekudala ilindelwe, ifowuni enexabiso elikhulu lemali.
Le yindlela i-Galaxy Note 9 eya kujongeka ngayo ibrown, bhlowu kunye nomnyama
Omnye umfanekiso wentengiso sele ucociwe apho sinokubona imibala emitsha apho iya kuba khona i-Galaxy Note 9
Ukucocwa kweenkcukacha zePocophone F1
Ukucocwa kokuqala kokucaciswa kwePocophone F1. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni yentsingiselo entsha yeXiaomi esele siyazi kancinci.
Isamsung iya kusebenza kwi-smartphone yokudlala
Amarhe: I-Samsung iphuhlisa eyayo i-smartphone yokudlala. Fumanisa ngakumbi malunga nobukho bale fowuni kwinkampani yaseKorea.
Amaxabiso e-Galaxy Note 9 abonakaliswe eYurophu
Sele sinamaxabiso eGalaxy Note 9 eYurophu. Fumanisa amaxabiso eziza kuba nazo iinguqulelo ezimbini zokuphela okuphezulu kweSamsung.
Iwebhusayithi yeSamsung icoca imifanekiso yokuqala esemthethweni yeGlass Watch
Esinye sezixhobo esithethe ngazo kwezona nyanga zidlulileyo, kwaye ayisiyi-smartphone, yiGlass Watch, smartwatch yenkampani. Umfanekiso wokuqala weGlass Watch awuveli ekuvuzeni, kodwa ngokwawo Samsung iwebhusayithi eUnited States.
Xiaomi Mi Max 3 Pro ifunyenwe kwi-Intanethi
IXiaomi Mi Max 3 Pro iyavela kwiwebhusayithi yeQualcomm. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni yeXiaomi engaziwa ukuba ikhona okanye ayikho.
Inqaku le-Honor 10 liqinisekisiwe yi-TENAA nge-512GB yememori yangaphakathi
Njengomhla wokumiliselwa kwe-Honor Qaphela i-10 isondela, sele sisazi ngakumbi malunga neempawu kunye nokuchazwa kwezobuchwephesha oku I-Honor Qaphela i-10 idlule kwi-TENAA, isiqinisekiso sase-China kunye nomlawuli, malunga ne-512GB yememori yangaphakathi kunye ne-5.95-intshi enkulu Isikrini se-AMOLED.
Isamsung iza kwazisa ngesiseko sokudibanisa ngokudibeneyo seGalaxy Note 9 kunye neGlass Watch
Nge-9 ka-Agasti, inkampani yaseKorea i-Samsung izakwazisa ngokusesikweni i-Galaxy Note 9, eyona smartphone ithandwayo inesitayile sentengiso. Isiseko sokutshaja kabini songeza kwinani lezixhobo kunye neemveliso eziza kubona ukukhanya kwemini ngo-Agasti 9. kunye neNqaku 9
Le yeminye yemisebenzi yeS Pen ye-Galaxy Qaphela 9
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, siye saxela inkcazo yeGalaxy Tab S4, ngokusebenzisa i-firmware yale fowuni, apho Le yeminye yemisebenzi iS Pen ye-Galaxy Note 9 eya kusinika yona, imisebenzi ehluziweyo nge-Galaxy Tab S4 iFirmware
I-Sony IMX 586: Inzwa entsha ye-MP ye-48 MP
I-Sony IMX 586: i-48 MP ye-sensor yekhamera yeSony. Fumanisa ngakumbi malunga ne-sensor entsha evela kwi-brand yaseJapan eza kufika ngo-Septemba.
Ukucaciswa okutsha kwe-LG V40 ThinQ kutyhiliwe
I-LG V40 ThinQ: Ukucaciswa okutsha kuvuza. Fumana ngakumbi malunga nesiphelo esitsha esivela kwinkampani yaseKorea eya kubhengezwa ngo-Septemba.
I-Galaxy Note 9 iya kuba nebhetri ye-4.000 mAh
Ibhetri ye-Samsung Galaxy Note 9 iya kuba yi-4.000 mAh. Fumanisa ngakumbi malunga nebhetri eya kuba nesiphelo esiphezulu sophawu lwesiKorea.
I-MIUI 10 ifika namhlanje kwiifowuni ezintsha zeXiaomi
Iifowuni ezingakumbi zeXiaomi zihlaziya kwi-MIUI 10 namhlanje.Fumanisa ngakumbi malunga nokuba zeziphi iimodeli ezifumana uhlaziyo lokwahlulahlula ngokwezifiso.
INokia 5.1 Plus yokuqalisa ngaphandle kwe China kungekudala
INokia 5.1 Plus iza kuphehlelela kwiimarike ezintsha kungekudala. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwebanga eliphakathi kwe China eliza kwenzeka kungekudala.
Inqaku le-Honor 10 liya kuboniswa ngoJulayi 31
Inqaku le-Honor 10 liya kutyhilwa ngokusesikweni ngoJulayi 31. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wenkcazo yeflegi yohlobo lwesiTshayina.
Kuhlaziywa i-OnePlus 3 kunye ne-3T yoKhuseleko kuJulayi
I-OnePlus ikhuphe uhlaziyo olutsha kwi-OnePlus 3 kunye ne-3T, iiflegi ezimbini zonyaka wookhokho benkampani, eziza ne-OnePlus patch ikhuphe uhlaziyo lokhuseleko oluhambelana nenyanga kaJulayi ye-OnePlus 3 kunye ne-3T kunye nokuphuculwa okuncinci okuncinci. .
Ukuthengiswa kweGPS S9 kuwela kwikota yesibini yonyaka
Ukuthengiswa kweGPS S9 kwehlile kwikota yesibini. Fumanisa ngakumbi malunga nokuthengisa okungalunganga komgangatho ophezulu wenkampani yaseKorea.
I-Sony Xperia XZ2 yeNkulumbuso iza kufika eYurophu ekupheleni kukaSeptemba
I-Xperia XZ2 yeNkulumbuso iza kufika eYurophu ekupheleni kukaSeptemba. Fumanisa ngakumbi malunga nokwaziswa okuphezulu kukaSony eYurophu.
INokia 5.1 Plus iyathengisa ngosuku lwayo lokuqala kwintengiso
INokia 5.1 Plus ithengisa ngeyure ezingama-24 ithengiswa e-China. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso yephakathi phakathi kuluhlu e China.
I-Samsung Galaxy Note 5 ifumana uhlaziyo lokhuseleko lukaJulayi 2018
Nangona ezinye iiterminal bezisemarikeni okwethutyana, abanye abavelisi, kubandakanya i-Samsung, abalibalanga ngokupheleleyo malunga nenkampani yaseKorea i-Samsung sele iqalile ukukhupha uhlaziyo lokhuseleko lwe-Samsung Galaxy Note 5
I-firmware yeGalaxy Tab ye-S4 iqinisekisa ukuba iya kuba ne-scanner ye-iris kunye nokuqatshelwa kobuso
Kwezi veki zimbini zidlulileyo, inani lokuvuza okunxulumene neetafile ezimbini ezizayo ukuba inkampani yaseKorea icwangcise ukwazisa ngokhuseleko esiza kusinikwa yiGalaxy Tab S4 iya kufumaneka kwiskena se-iris ukongeza kwinkqubo yokwamkelwa kobuso
I-Samsung Go ye-Samsung iqinisekisiwe yi-Bluetooth SIG
Kuninzi okuye kwahletywa malunga ne-Samsung Go yokuqala ye-Samsung, kwaye yile, emva kokuba ii-smartphones ezininzi ezinale nkqubo zidityanisiwe kwintengiso, ukufika kweselfowuni yokuqala ye-Samsung nge-Android Go, inkqubo yokusebenza esekwe kwi-Android, kuya kusondela. I-Oreo yenzelwe ii-mobiles ezisezantsi.
INokia 6.1 Plus iya kuthengiswa kumazwe aliqela kweli hlobo
INokia 6.1 Plus iza kufika kumazwe amatsha kweli hlobo. Fumanisa ngakumbi malunga nokwaziswa kwebanga eliphakathi lakwaNokia kwiimarike ezintsha.
Isithethi esili-Samsung esine-Bixby esiza kutyhilwa ngo-Agasti
Isamsung iya kutyhila isithethi sayo esihlakaniphile kunye neBixby ngo-Agasti 9. Fumana ngakumbi malunga nokufika kwesandisi-lizwi senkampani kwintengiso.
INqaku eliHloniphekileyo le-10 liya kuziswa kwi-IFA 2018
Inqaku eliHloniphekileyo le-10 liya kuziswa nge-30 ka-Agasti kwi-IFA 2018. Fumana ngakumbi malunga nokunikezelwa kweNhlonipho ephezulu ngo-Agasti.
I-Huawei ithengise i-100 yezigidi zeefowuni ukuza kuthi ga ngoku kwi-2018
IHuawei ifikelele kwi-100 yezigidi zeefowuni ezithengisiweyo. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso yohlobo lwaseTshayina ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka.
I-TalkBand B5, into entsha enokunxitywa nguHuawei ngesikrini se-AMOLED
Omnye wabavelisi abahambahambayo ohleli kwintengiso enxitywayo yinkampani yaseTshayina iHuawei. Ngelixa kuyinyani ukuba ijolise, ngakumbi iHuawei isizisa kumlandeli weTalkBand B3. Sithetha ngeTalkBand B5 entsha, enxibekayo esungulwe kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Yazi!
I-Galaxy Watch iya kuziswa ecaleni kweNqaku 9 kwaye ayizukuphatha i-Wear OS
I-Samsung Galaxy Watch, ukuba ekugqibeleni ibizwa njalo, iya kuziswa ngokusesikweni nge-9 ka-Agasti ngeNqaku 9, kwaye iya kuphatha iTizen endaweni ye-Wear OS.
Imifanekiso yokuqala ye-Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018) ngaphandle kweqhosha lomzimba ihluziwe
Izolo sikubonise iinkcukacha zesizukulwana esilandelayo seGalaxy Tab S4, ithebhulethi ephezulu engasokuze ifike kwintengiso nge-Snapdragon Imifanekiso yokuqala ye-Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018) sele icociwe kwaye ibonisa thina njengeyona nto intsha yokunyamalala kweqhosha lomzimba
I-Huawei Nova 3i ibonisiwe. Funda konke malunga neselfowuni yokuqala ngeKirin 710!
Ukongeza ekuboniseni iNova 3, isiphelo esitsha senkampani esiza neKirin 970 SoC, uHuawei ubhengeze iNova 3i, ibanga eliphakathi kunye neHuawei Nova 3i ityhilwe kunye nazo zonke izinto kunye neenkcukacha zayo. ubuchule. Sikunika iinkcukacha malunga nesi sixhobo!
Yonke ingcaciso malunga neXiaomi Mi Max 3 entsha
Sikuxelela zonke iinkcukacha zeXiaomi Mi Max 3, ifowuni eyasungulwa namhlanje yinkampani kumsitho osemthethweni
Ixabiso elihluzekileyo leXiaomi Mi A2
Ukucoca ixabiso lokugqibela leXiaomi Mi A2 ngaphambi kokunikezelwa kwayo. Fumanisa ngakumbi malunga namaxabiso aza kuba nawo ifowuni enye ye-Android.
I-Kirin 710: Inkqubo entsha ye-Huawei yaphakathi
I-Kirin 710: Iiprosesa eziphakathi kwebanga leHuawei ziyahlaziywa. Fumanisa okungakumbi malunga neprosesa entsha yaphakathi-kuluhlu lwegama laseTshayina.
I-Sony Xperia XZ3 ivuza ngaphambi kokunikezelwa kwayo
Ivuza i-Sony Xperia XZ3 kwinyanga ngaphambi kokunikezelwa kwayo. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwaseJapan oluza kufika kwi-IFA 2018.
IHuawei Nova 3: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumanisa okungakumbi malunga nefowuni entsha yohlobo lwesiTshayina, kwinqanaba eliphakathi-kwinqanaba-
Iifowuni ezimbini ezintsha zeVivo zisandula ukuvuza kwi-TENAA
IVivo ibonakala ngathi inezikhululo ezimbini eziphakathi kuluhlu olukulungeleyo. Ezi ziVivo V1732BA kunye neV1732BT, iifowuni ezintsha zenkampani ezinezixhobo ezimbini zeVivo zisanda kuhluzwa kwiwebhusayithi yeTENAA, isiqinisekiso saseTshayina esiza kuthi iifowuni eziza kuthengiswa eChina zigqithe.
AbakwaSony baqinisekisa ukuba baya kuzisa ifowuni entsha kwi-IFA 2018
U-Sony uza kutyhila ifowuni entsha kwi-IFA 2018. Fumana okungakumbi malunga nokuqinisekiswa kwenkampani kunye neefowuni abanokuzazisa ngazo.
Ukucaciswa kweXiaomi Mi Max 3 kutyhilwe
Kutyhilwe iinkcukacha ezisemthethweni zeXiaomi Mi Max 3. Fumana ngakumbi malunga noko sinokulindela kwifowuni yohlobo lwesiTshayina.
I-Samsung Galaxy Tab ye-S4 yokugqibela yeeNdawo ziVuzile
Kwiminyaka yakutshanje, siye sabona ukuba inani labavelisi ababhejayo kumacwecwe linciphisiwe kakhulu, kubandakanya nelalo Xa kusekho iinyanga, okanye iintsuku ezimbalwa, ukubonisa iGalaxy Tab S4, zonke iinkcukacha sele zivuziwe yecwecwe elitsha leSamsung
IHuawei Nova 3i ibonakala kwiAliexpress ngaphambi kwexesha
IHuawei Nova 3i ivuza ngokupheleleyo kwiAliexpress. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ekumgangatho ophakathi kumenzi waseTshayina.
Imifanekiso yokuqala yeGalaxy Note 9 ihlungiwe
Kukho ixesha elincinci nelincinci leGlass Qaphela 9 ukubona ukukhanya ngokusemthethweni kwaye ekugqibeleni sinokuqinisekisa kunye / okanye ukukhanyela onke amarhe esinawo Xa zikho ngaphantsi kweentsuku ezingama-20 zokubonisa ngokusesikweni i-Galaxy Note 9, Imifanekiso yokuqala yesiphelo sele ivuza.
Uhlaziyo lukaJulayi lokhuseleko lweGalaxy S8 kunye ne-S8 + ngoku luyafumaneka
Njengenyanga nganye, inkampani yaseKorea isungule iiseva zayo ukuvuselela ezona nkampani zibalaseleyo zeenkampani zohlaziyo lokhuseleko oluhambelana nenyanga kaJulayi 2018 ye-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S8 + ngoku iyafumaneka
Uvavanyo lwesantya se-Meizu 16 luyavela
Amanqaku ebhentshi kaMeizu 16 akhutshiwe kwi-Intanethi ngaphambi kokumiselwa ngokusemthethweni kwefowuni kwinyanga ezayo. Imifanekiso evuzayo Uvavanyo olukhawulezileyo lwesantya se-Meizu 16 nge-chip yeQualcomm Snapdragon 845 chip iye yavuza inethi. Sandisa iindaba kuwe!
Isifundi seminwe se-Ultrasonic se-Samsung Galaxy S10
Kuqinisekisiwe ukuba i-Samsung Galaxy S10 iza kusebenzisa i-ultrasonic fingerprint reader, siza kukuxelela zonke iinkcukacha.
Imifanekiso yokuqala esemthethweni yeXiaomi Mi Max 3 nantsi
Kutyhilwe imifanekiso yokuqala esemthethweni yeXiaomi Mi Max 3. Imifanekiso yokuqala yefowuni yentsimbi yaseTshayina ilapha
UXiaomi uqinisekisa ukwenziwa kweMi A2
Ipowusta entsha yokwazisa iqinisekisa ukuba iXiaomi Mi A2 izakuvezwa kungekudala kwaye ayinakuza yodwa
I-Alcatel 5V debuts enekhamera ezimbini kunye nenotshi
Sikuxelela zonke iinkcukacha zeAlcatel 5V, isixhobo esineflegi entsha yeAlcatel esiza nezinto ezintle
I-Huawei Mate 10 kunye ne-P20 ziya kufumana iGPU Turbo ngo-Agasti
I-GPU Turbo iza kwi-Huawei Mate 10 kunye ne-P20 ngo-Agasti. Fumana ngakumbi malunga nokufika kolu hlaziyo kwiifowuni zohlobo lwesiTshayina.
I-Huawei ikhupha i-EMUI 8.1 ye-Mate 10 kunye ne-Mate 10 Pro
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, uHuawei ubhengeze ukuba iMate 10 kunye neMate 10 Pro ziya kufumana i-EMUI 8.1 phantsi kwe-Android 8.1 Oreo phakathi kule nyanga. Ngoku, i-Huawei sele ikhuphe i-EMUI 8.1, ungqimba lwayo lwamva nje, phantsi kwe-Android 8.1 Oreo ye-Mate 10 kunye ne-Mate 10 Pro.
Inqanaba lokungena elitsha le-Samsung liya kuba nesikena se-iris
Isamsung iza kwazisa umfundi wayo we-iris kwisiphelo sayo esisezantsi esitsha. Fumanisa malunga nezicwangciso zenkampani zokusebenzisa umfundi we-iris kwiifowuni ezininzi.
I-MIUI 10 ifikelela kwiifowuni ezintsha ze-Xiaomi ezingama-21
Iifowuni ze-Xiaomi ezingama-21 sele zihlaziya ziye kwi-MIUI 10. Khangela ukuba zeziphi iimodeli eziza kufumana uhlaziyo lolungelelwaniso ngokwezifiso.
INokia 5.1 Plus iya kuboniswa ngoJulayi 18
INokia 5.1 Plus iya kufika ngokusesikweni ngoJulayi 18. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokubonisa kuluhlu oluphakathi lwegama.
Umphathi wecandelo lesahlulo seSamsung sele esebenzisa i-Galaxy Note 9 esidlangalaleni
Nge-9 ka-Agasti, inkampani yaseKorea icwangcise umsitho apho izokwazisa ngokusesikweni i-Galaxy Note 9 (uninzi lwee-nines kunye endizibonayo apha) Elona xanduva liphezulu lesahlulo seSamsung, u-DJ Koh, sele ebonwa nge-Galaxy Note 9 entsha. esidlangalaleni, ngaphandle kokuzihlupha ngokuyifihla nanini na
UXiaomi uphinde akhuphe uhlaziyo kwi-Android Oreo ye-Mi A1
Malunga neentsuku ezili-15 ezidlulileyo, abafana abavela eXiaomi baphoqeleka ukuba basuse kumaseva abo uhlaziyo lwamva nje ababelukhuphele enye yefemu yabo yaseAsia, iphinde yakhupha uhlaziyo kwi-Android 8.1 yesiphelo sayo seMi A1, uhlaziyo olurhoxisayo kwiiveki ezimbini ezidlulileyo ngenxa yeengxaki eyazivezayo.
Isivumelwano: I-ZTE iya kusebenza e-United States phantsi kweemeko ezahlukeneyo
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, sikwazise malunga nokuphela kweengxaki ze-ZTE kunye neSebe lezoRhwebo laseMelika. Ewe, oku kungaphezulu, i-ZTE ingaqhubeka nokuthengisa e-United States, kodwa ngaphandle kokulandela izivumelwano ezininzi ezimiselweyo. Sandisa iindaba kuwe!
U-Armani ubhengeza ii-smartwatches zayo ezintsha kunye noMncedisi kaGoogle ubandakanyiwe
Ngoku ungazi iiwotshi ezintsha zeArmani ezibonakaliswa ngokuba noMncedisi kaGoogle kwiOnline Wear OS.
IVivo NEX S ifumana olona vavanyo ludumileyo lokunyamezela
IVivo NEX S iphantsi kovavanyo lokunyamezela lweJerryRigEverything. Fumanisa ngakumbi malunga novavanyo lwonyamezelo olusezantsi kweVivo.
Isipho esikhethekileyo se-Chuwi Hi9 AIR, isaphulelo sama-40 eeuros kwi-Prime Day usebenzisa isigqebhezana esiqhotyoshelweyo. (Ivumelekile kubaxhasi beNkulumbuso kunye nabangengawo iNkulumbuso)
I-Xiaomi Mi 8 Edition Edition inokumiliselwa ngoJulayi 24
Ushicilelo lweXiaomi Mi 8 Explorer luya kuqaliswa ngoJulayi 24. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika okuphezulu kwesiphelo kwimarike kwiveki ezayo.
IHuawei Nova 3 kunye neNova 3i ziya kufika ngoJulayi 26
IHuawei Nova 3 kunye neNova 3i ziya kuba semthethweni ngoJulayi 26. Fumana ngakumbi malunga nokufika kwezi modeli kwintengiso.
Ukucoca ngokupheleleyo iinkcukacha zeXiaomi Mi A2 Lite
IXiaomi Mi A2 Lite: Ukucaciswa kunye nexabiso elivelileyo. Fumanisa ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi lwenqanaba elitsha lophawu lwaseTshayina esele luvuvuzelwe ngokupheleleyo.
I-Spotify Lite ngoku ifumaneke ngokungekho semthethweni kwi-Wear OS
Umsebenzisi we-XDA Developers ukhuphe ingxelo engafanelekanga yeSpotify Lite ye-Wear OS esivumela ukuba silawule ulawulo lweakhawunti yethu.
INokia 5.1 Plus ifumana umhla omtsha wentetho
INokia 5.1 Plus inokuboniswa ngoJulayi 17. Fumanisa ngakumbi malunga nosuku olutsha lwenkcazo-midlalo yeNokia.
Ukucoca ezinye iinkcukacha zeXiaomi Mi Max 3
IXiaomi Mi Max 3: Ukucaciswa kokuqala kokuvuza. Fumana ngakumbi malunga neenkcukacha zokuqala ezivela kwiXiaomi phablet,
I-Moto E5 Dlala nge-Android Go ifika eYurophu
I-Moto E5 Dlala ngokudlalwa kwe-Android Go eYurophu naseLatin America. Fumana ngakumbi malunga nokufika kwesiphelo esisezantsi esitsha seMotorola.
Isiphelo sendlela yeHTC yalo nyaka, i-HTC U12 + sele iqalile ukufumana uhlaziyo olutsha oluphucula ukusondeza ngokuzenzekelayo kwimowudi yevidiyo.
I-Vivo Nex S yekhamera ebuyisekayo idlula kuvavanyo lweJerryRigEverything
Ikhamera ebuyisekayo kwiVivo Nex S ibonakalise ukuba yomelele kunokuba uninzi lweengcali lwaluyibanga ekuqaleni.
OPPO ukumilisela iifowuni ezingama-40 eYurophu
I-OPPO iya kuphehlelela iifowuni ezingama-40 eYurophu. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zomenzi waseTshayina zokuphehlelela iimodeli ezintsha eYurophu.
IXiaomi Mi 8, Mi A2, Mi Max 3 kunye nePocophone F1 ebhaliswe eYurophu
UXiaomi uqinisekisile iifowuni ezininzi zokuphehlelelwa eYurophu. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zebrendi zokumilisela ezo modeli.
I-Honor 10 ithengise iiyunithi ezizizigidi ezi-3 kwihlabathi liphela
I-Honor 10 sele ithengise ngaphezulu kweeyunithi ezizigidi ezi-3. Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo ifowuni evela kumenzi weNtlonipho anayo kwihlabathi liphela.
U-OnePlus uhlaziya usetyenziso lwegalari yakhe esivumela ukuba sinciphise iividiyo kwaye songeze umculo ongasemva
I-OnePlus iqalile ukumilisela uhlaziyo olutsha lwesicelo seGalari kwiziphelo zayo ezongeza imisebenzi emitsha.
Isamsung ingabonisa iGlass Watch kwi-IFA 2018
I-Samsung Galaxy Watch inokuboniswa kwi-IFA 2018. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wenkcazo yewotshi yenkampani yaseKorea.
I-Sony Xperia XZ2 yeNkulumbuso iya kuphehlelelwa ukuphela kuka-Agasti eSpain. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwesiphelo esiphakamileyo sikaSony kwimakethi yaseSpain.
Umfanekiso wokuqala wento eya kuba yinxalenye yonyuselo lweGlass Note 9 sele ivuziwe kwaye isivumele ukuba siyibone uyilo olutsha lwesi sibetho.
Ukucoca iXiaomi Mi A2 Lite entsha
Xiaomi Mi A2 Lite: Ifowuni entsha yeXiaomi ene-Android One.Fumanisa le fowuni intsha ivela kuhlobo lwesiTshayina oluza kuhamba neMi A2.
I-Galaxy Note 9 yayiza kuthengiswa ngo-Agasti 24
I-Samsung Galaxy Note 9 iya kuthengiswa ngo-Agasti 24. Fumana ngakumbi malunga nosuku lokumiliselwa kwefowuni yohlobo lweKorea.
Uhlaziyo lwezokhuseleko lukaJulayi lweGlass J6 ngoku iyafumaneka eSpain
Uhlaziyo lokuqala lokhuselo lweGPS J6 ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe eSpain nase-Italiya, ingamazwe okuqala ukuyifumana.
I-Android Auto sele isivumela ukuba singene kwi-ajenda epheleleyo ye-smartphone yethu
Uhlaziyo olulandelayo lwe-Android Auto luya kuthi ekugqibeleni lusivumele ukuba sifikelele kuluhlu olupheleleyo lweefowuni eziphathwayo esizigcinileyo kwi-smartphone yethu.
I-Sony Xperia XA2 Plus: Uluhlu oluphakathi lwebhrendi entsha
I-Sony Xperia XA2 Plus: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ekumgangatho ophakathi ukusuka kuhlobo lwaseJapan.
IXiaomi Mi Max 3 iya kuziswa ngoJulayi 19
IXiaomi Mi Max 3 iya kuboniswa ngoJulayi 19. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wenkcazo yefowuni entsha yohlobo lwaseTshayina.
LG Q7: Uluhlu olutsha lwe-LG oluphakathi lufika eSpain
I-LG Q7 isungulwe ngokusesikweni eSpain. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwinqanaba elitsha eliphakathi lenkampani ngokusemthethweni eSpain
Inkcazo yeNokia 5.1 Plus ihlehlisiwe
Inkcazo yeNokia 5.1 Plus irhoxisiwe. Fumana ngakumbi malunga nokucinywa kwalo msitho oko kuthetha ukuba kuya kufuneka silinde ukuze sazi inombolo yefowuni.
UXiaomi uza kuvula ivenkile eZaragoza ngoJulayi 14
UXiaomi ubhengeza ukuvulwa kwevenkile yayo eZaragoza ngoJulayi 14. Fumana ngakumbi malunga nevenkile entsha yamaTshayina eSpain.
IAlldocube X, ithebhulethi enesikrini se-2k, isandi seHifi kunye ne-Android 8.1
IAlldocube iveza icwecwe eline-2k yesikrini se-AMOLED, esinokuthi sifumane ezona movie zethu sizithandayo.
I-Galaxy A8 kunye ne-A8 + (2018) iqala ukufumana i-Android 8.0 Oreo
Ukuhlaziywa kweGalaxy A8 kunye ne-A8 + (2018) kwi-Android 8.0 Oreo. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo oluqala ukufikelela kwiimodeli ezimbini zeSamsung.
Kutyhilwe umfanekiso wokuqala osemthethweni weGalaxy Note 9
Ityhile uyilo lweGreen Qaphela 9 kumfanekiso wayo wokuqala osemthethweni. Fumana ngakumbi malunga nomfanekiso wokuqala wesiphelo esitsha se-Samsung.
INokia 5.1 Plus iye yavuza: Iscreen esine-notch kunye nekhamera ephindwe kabini
Ukucoca uyilo olupheleleyo lweNokia 5.1 Plus ngaphambi kokunikezelwa kwayo. Fumana ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi lweNokia.
I-Chuwi Hi9 Pro, amanqaku kunye nokubalulwa kwethebhulethi ene-Android Oreo
Umvelisi uChuwi uza kuphehlelela i-Hi9 Pro kwinyanga ezayo, ithebhulethi eneenkcukacha ezinomdla kakhulu kunye neempawu ngexabiso elifanelekileyo.
I-Nubia Z18 ibonakala kwi-Geekbench ecaleni kweempawu zayo eziphambili
I-Nubia, inkxaso-mali ye-ZTE, ibonakala ngathi ilungile kwiflegi yayo elandelayo. Le yiNubia Z18, isiphelo esineenkcukacha ezithile zobuchwephesha ezenze ukuba iNubia Z18 ibonakale kutshanje kwiGeekbench, isishiya neenyani ezinomdla malunga nokubalulwa kwayo okuphambili. Fumanisa!
I-LG Q6 iqala ukufumana i-Android 8.0 Oreo
I-LG Q6 ifumana uhlaziyo kwi-Android 8.0 Oreo. Abasebenzisi eMzantsi Korea bafumana uhlaziyo lwe-Android Oreo ngokungalindelekanga.
Iimodeli ezisixhenxe zeHuawei sele zifumana i-EMUI 8.0 esekwe kwi-Android 8.0 Oreo
I-Huawei kutshanje ibhengeze ukukhutshwa kohlaziyo lweemodeli ezisixhenxe eziza kungenisa i-EMUI 8.0 esekwe kwi-Android 8.0 Oreo. I-Huawei ibhengeze ukuba i-7 yeemodeli zayo ziya kufumana i-EMUI 8 esekwe kwi-Android 8.0 Oreo. Sandisa iindaba kuwe!
Isicelo seKhalenda yeSamsung ngoku sikuvumela ukuba ungeze izitikha kwiindawo zokuqeshwa
Isamsung iyaqhubeka nokuhlaziya usetyenziso lwayo ngokongeza imisebenzi kwiitheminali ezindala ezikhoyo kwiGPS S9
Isamsung ifumana iApple kwintengiso yeshishini laseNetherlands
I-Samsung yezizwe ngezizwe i-Samsung ikwazile ukugqitha kunyaka nje omnye, kwaye ukuza kuthi ga ngoku, inkampani esekwe eCupertino Apple kwimakethi yeshishini
IVivo Nex izakuqala ukwazisa kwilizwe liphela kule nyanga
IVivo NEX izakwazisa ngaphandle kwe China kule nyanga. Fumana ngakumbi malunga namazwe apho uya kuba nakho ukuthenga khona ifowuni.
IHuawei TalkBand B5 iya kuziswa nge-18 kaJulayi
IHuawei iza kwazisa ngeHuawei TalkBand B5 ngoJulayi 18. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokubhengezwa kwesongo esitsha sophawu lwaseTshayina.
UXiaomi usebenza kwifowuni entsha ephezulu
I-Pocophone: Uphawu olutsha lukaXiaomi lwaseIndiya. Fumana ngakumbi malunga nolu hlobo lweXiaomi ukumilisela iifowuni eIndiya.
UXiaomi uqalise ngenguqulelo entsha yeXiaomi Redmi 6A
Xiaomi Redmi 6A: Inguqulelo entsha esungulwe e-China. Fumanisa ngakumbi malunga nenguqulelo entsha yefowuni yokwazisa e China namhlanje.
INokia 3.1 isungulwe ngokusesikweni eSpain. Fumana okunye malunga nokuqaliswa koluhlu oluphakathi ngokusemthethweni kwilizwe lethu.
Uhlaziyo lwamva nje kumava eSamsung luvumela abasebenzisi ukujikeleza isikrini seGPS S8
Isamsung ikhuphe uhlaziyo olutsha kulungelelwaniso lwamava e-Samsung ekuvumela ukuba ujikeleze isikrini sasekhaya kunye neemenyu
Iifowuni ezili-10 ezinamandla zikaJuni 2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark
Enye yezona ndawo zaziwayo, ezithandwayo nezithembekileyo kumhlaba we-Android ngokungathandabuzekiyo yi-AnTuTu. Kwaye kukuba kunye neGeekBench nabanye, uyazi ukuba zeziphi ii-smartphones ezinamandla kakhulu zikaJuni ngenxa yoluhlu olutyhilwe nguAntutu Benchmark. Bafumanise!
Amalungelo abenzi beHuawei iwatchwatch evumela ukuba ugcine iifowuni
Amalungelo abenzi beHuawei iwatchwatch evumela ukuba ugcine iifowuni. Fumana ngakumbi malunga nelungelo elilodwa lomenzi elitsha lophawu lwaseTshayina.
Isamsung ivula eyona mveliso inkulu yokuvelisa iifowuni
Isamsung ivula eyona mveliso inkulu yokuvelisa iifowuni emhlabeni. Fumana ngakumbi malunga neli ziko lemveliso leSamsung eIndiya.
Ukucoca iinguqulelo ezahlukeneyo zeXiaomi Mi A2
Iinguqu ezahlukeneyo kunye nemibala apho iXiaomi Mi A2 izakufika kwimarike xa isungulwa ekupheleni kwenyanga sele ivuza.
UXiaomi uza kuvula iivenkile ezintsha eValencia naseLa Coruña
UXiaomi ubhengeza iivenkile ezintsha eValencia naseLa Coruña. Fumanisa ngakumbi malunga neevenkile ezintsha zohlobo lwesiTshayina oluya kufika eSpain.
INokia 8810 iya kuba nakho ukusebenzisa iWhatsApp
INokia 8810 inokuba neWhatsApp. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwesicelo semiyalezo kwifowuni yohlobo.
Xiaomi Mi Mix 3 amaxabiso atyhiliwe
Amaxabiso eXiaomi Mi Mix 3 atyhilelwe.Fumana okuninzi ngamaxabiso eziza kuba nazo iinguqulelo zefowuni entsha yeXiaomi.
I-OPPO A5 iya kuphehlelela nge-13 kaJulayi
I-OPPO A5: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha yohlobo lwesiTshayina olusungulwe ngoJulayi 13,
INokia X5 iya kuboniswa ngoJulayi 11
INokia X5 iza kutyhilwa ngokusesikweni ngoJulayi 11. Fumana ngakumbi malunga nokunikezelwa kwefowuni entsha kraca.
Amarhe amatsha e-Samsung Galaxy S10 ngekhamera kathathu
Kukho amarhe amatsha okwahluka kweekhamera ezintathu zeGPS S10, sikuxelela iinkcukacha zolu lwakhiwo lweefoto
INokia X6 iza kuphehlelela kwilizwe liphela nge-19 kaJulayi, njengeNokia 6.1 Plus
INokia X6 isungula ngaphandle kwe China ngoJulayi 19 njengeNokia 6.1 Plus. Fumanisa ngakumbi malunga nokwaziswa kweNokia.
I-Honor Qaphela i-10 iza kufika ine-6,9-intshi yesikrini
Ukucaciswa kokuqala kweNqaku leNhlonipho 10. Fumanisa ngakumbi malunga neflegi entsha yohlobo lwesiTshayina oluza kungena kwintengiso kulo nyaka.
IXiaomi Mi Max 3 inokuboniswa kule nyanga
IXiaomi Mi Max 3 inokuboniswa ngokusesikweni ngoJulayi. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwefowuni entsha yentsimbi yaseTshayina kwintengiso kule nyanga.
Amalungelo awodwa omenzi wechiza eSamsung yinkqubo eqondakalayo yobuso
Isamsung inelungelo elilodwa lomenzi lenkqubo yokwamkelwa kobuso. Fumana ngakumbi malunga nelungelo elilodwa lomenzi elitsha kwinkampani yaseKorea.
I-Huawei P9 kunye ne-P9 Lite ayizukuhlaziya kwi-Android Oreo
Akusayi kubakho Android Oreo yeHuawei P9 kunye neP9 Lite. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo lweefowuni ezingazukufika ekugqibeleni.
Umdlalo we-Moto Z3 uza kuqaliswa eSpain ngo-Agasti
Ukudlala kweMoto Z3: Ixabiso kunye nomhla wokuqaliswa eSpain kuqinisekisiwe. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwefowuni yeMotorola eSpain.
Amalungelo awodwa omenzi wechiza e-OOO ezintathu zeefowuni ezisongekileyo
I-OPPO ineefowuni ezintathu ezahlukeneyo ezinokusongwa. Fumanisa ngakumbi malunga nelungelo elilodwa lomenzi wechina lophawu lwefowuni olusongekayo.
I-LG iya kusebenza kwifowuni yokusonga
I-LG sele inelungelo elilodwa lomenzi lokufowuna kwayo okokuqala. Inkampani yaseKorea sele isebenza kwifowuni yayo yokuqala yokusonga, esele inelungelo elilodwa lomenzi ngokusemthethweni.
I-Galaxy X kunye neGPS S10 ziguqula umhla wazo
Umhla wokubonisa we-Galaxy X kunye neGPS S10 utshintshiwe. Fumana ngakumbi malunga nemihla yokukhutshwa kweemodeli zeSamsung.
Yiyo le meko yokuqala ye-Galaxy Note 9 ijongeka ngayo
Amatyala okuqala e-Samsung Galaxy Note 9 sele evuziwe, iimeko ezingqina uyilo lwe-Samsung phablet elandelayo
IXiaomi Mi MIX 3 iya kuba nekhamera esliding
IXiaomi Mi MIX 3 iya kuba nekhamera esliding. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zohlobo lwentengiso yaseTshayina zokusebenzisa le nkqubo kwifowuni.
I-Oukitel K8: iinkcukacha kunye neempawu
Iflegi entsha yomvelisi wase-Asia u-Oukitel, i-K8 izakufika kwimarike ekupheleni kukaJulayi. Ngelixa sikubonisa ukuba zeziphi iinkcukacha zokugqibela
UXiaomi usebenza kwi-smartphone e-United States
UXiaomi uza kuphehlelela iMelika kuphela. Fumana ngakumbi malunga nokungena kwegama laseTshayina kwimakethi yaseMelika.
Uhlaziyo kwi-Android Oreo yeGlass J3 2017, J5 2017 kunye neJ7 2017 ilibazisekile
Uhlaziyo olulindelweyo lweetheminali zeGlass J3, iGalaxy J5 kunye neGlass J7 2017 ziya kulibaziseka iinyanga ezimbalwa kude kube nguSeptemba
IGreen Note 9 iya kufika inemibala emihlanu eyahlukeneyo
I-Samsung Galaxy Note 9 iya kufumaneka ngemibala emihlanu. Fumanisa ngakumbi ngemibala ekhethiweyo yokuqalisa kwabo kwintengiso.
I-OnePlus 5 kunye ne-5T sele zihambelana neProjekthi iTreble
I-OnePlus 5 kunye ne-5T sele inenkxaso yeProjekthi yeTrble. Fumana ngakumbi malunga ne-beta entsha eyongeza inkxaso kwiifowuni ezimbini zebrendi.
Ifowuni enokusongwa yeSamsung iya kuba nebhetri esongekayo
Ifowuni enokusonga yeSamsung iya kusebenzisa ibhetri esongekayo. Fumanisa ngakumbi malunga nebhetri eya kuyisebenzisa i-Samsung Galaxy X.
Ibhentshi yeNqaku le9 le-9810 kunye nokuvuza kwe-Exynos XNUMX
Ibhentshi elitsha lisanda kuhluzwa kwiGebenbench apho sinokubona ukuba ukusebenza kweGalaxy Note 9 kufana kakhulu naleyo yeGPS S9 +, iprosesa efanayo.
Imifanekiso emitsha ye-Motorola One iyavuza
Iifoto ezintsha zeMotorola One zivela endaweni, ngoku zinxibe umbala omhlophe.Ngaba iya kuba lolunye uhlobo lwesixhobo?
I-Android Go yokuqala ye-Samsung iya kuza namava e-Samsung
Ifowuni ye-Samsung ene-Android Go iya kuba namava eSamsung. Fumana okunye malunga nale fowuni kwi-brand yaseKorea eza kungekudala.
I-Meitu MP1710 ihamba nge-TENAA kwaye ezi ziimpawu zayo eziphambili
UMeitu, inkampani yaseTshayina esekwe ngo-2008, kubonakala ngathi sele inesiphelo esitsha esele silungile ngenxa yokudlula kwayo kwi-TENAA, umlawuli kunye neMeitu MP1710 yi-TENAA kwaye ityhila iimpawu zayo kunye neenkcukacha eziphambili zobuchwephesha. Sikwazisa
Umphathi omkhulu weMeizu uthi iMeizu 16 izakufika ngasekupheleni kukaJulayi okanye ekuqaleni kuka-Agasti
Okwangoku, i-Meizu 16 zezona zixhobo zilindelwe kakhulu kwinkampani, zivelisa amarhe angapheliyo kunye nokuqikelela apho uJack Wong, umphathi we-Meizu, waveza ukuba iMeizu 16 izakufika ekuqaleni kwale-Agasti okanye ukuphela kwale nyanga. . Siyakwandisa!
Hlonipha i-GT eyi-10, iselfowuni ene-8GB ye-RAM kunye neprosesa yaseKirin 970. Sinikela yona!
Sineziphelo ezitsha! Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, uHuawei wazise i-Honor 10 GT njenge-smartphone yayo yokuqala ene-8GB yememori ye-RAM njenge-Honor 10 GT ilapha! Esi sixhobo sibonakala ikakhulu njengefowuni yokuqala yeefemu ene-8GB ye-RAM. Ukongeza, ine-GPU Turbo.
Kutshanje, iVivo iphehlelele i-Vivo NEX, isiphelo esiphezulu esinekhamera ebuyisa umva esuse isidingo senkampani yokuphumeza uyilo lwenotshi oludumileyo.Ibug kwiVivo NEX ibangela ukuba ikhamera ebuyisekayo ivele ngaphandle kokuthatha naliphi na inyathelo eliza kwenzeka. Siyakwandisa!